February | 2009 | Ahkeno's Blog
February 18, 2009 February 18, 2009 ~ ahkeno	~5Comments
လာမည့်နွေရာသီမှာ Appleကသူရဲ့ နာမည်ကြီး ဖြစ်တဲ့ iphoneကိုဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးနှုန်း99ဒေါ်လာထိ နှိပ်ချ ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချတော့မဲ့ အကြောင်း RBC Capital Markets မှ ဆန်းစစ်သူ မိုက်ခ်အေ ဘရမ်စကီးကပြောကြားသွားကြောင်း အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာာ ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်။အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ အကီနိုအခုတလော အရူးထနေရတဲ့ ဖုန်းကတော iphone့ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကလည်း ခြောက်သိန်းကျော် ဆိုတော့ အမေ့ကို ပူစာရမှာ အားနာနေတာကြောင့် ငြိမ်နေရပြီး ထိုသတင်းက အကီနို အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းတစ်ပုဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ အခုလက်ရှိ အကီနိုကိုင်နေသည့် ဖုန်းကလေးမှာ Sony Ericsson ရဲ့ W300i ကလေးပါ။ ၀ယ်ကစတော့ နောက်ဆုံးပေါ် လည်းဖြစ် walkman စီးရီးဆိုတော့ သီချင်းနားထောင်ကောင်းတာရယ်၊ camera ရော ဖုန်းတွင်း memoryအသင့်အတင့်ပါတဲ့ ခေါက်ဖုန်းလေးဆိုတော့ လက်ကမချတမ်းရူးမိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြာလာလို့ ရိုးလာတာ မဟုတ်ပေမဲ့ အသစ်အဆန်းအနေနဲ့ရော အမြင်ပိုင်းနေနဲ့ရောiphone ကိုသဘောကျနေပါတယ်။ အကီနိုကလည်း အစွဲအလမ်းတမျိုးပါ အကီနို ဖုန်းအရမ်းရူးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Nokia ဖုန်းကို ဌားဆက်မိလို့ ပြောခံလိုက်ရပြီးထဲက Nokiaဆိုလုံးဝမကိုင်ချင်တေ့ာပါ။အဲဒါပြီးတော့ အကီနိုအမေက့ချက်ချင်း ကိုဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ Sony Ericsson လေးကို အခုချိန်ထိချစ်နေတုန်းပါတယ်။ အခုတလော ကဒ်ဖုန်းတွေပေါ်လာတာကြောင့်ပဲလား၊ လိုင်းတွေပဲကျပ်နေလို့လား မသိပါ အိမ်ရှေ့ကအော်လည်း မကြားရ၊နောက်ဖေးကအော်လည်း မကြားရနဲ့ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ဖုန်းကလည်း မှားလိုက်တာ ခဏခဏပဲ။တခါတလေများ ကိုယ့်ဖုန်းကိုပွားခံရပြီးလို့တောင်တွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး အကီနိုဖုန်းက တလနေမှ ၃၀၀၀လောက်ပဲကျတာ။အကီနိုကဖုန်းဆို အ၀င်ပဲလက်ခံတယ် ကိုယ်ဆက်ရင်လိုရင်းတိုရှင်း ဒါပဲ(ကပ်စီးနည်းတာ)။သူများကခေါ်ပြီဆိုရင်တော့ သူခေါ်သလားကိုယ်ခေါ်သလား မှားရအောင် စကားကိုယ်ရေပက်မ၀င်ပြောပါတယ်။အကီနိုအတွက် အကီနိုဖုန်းကလေးက can’t live without things ထဲမှာတခုအပါဝင်ပါပဲ။ဖုန်းမပါပဲ ဘယ်မှမသွားဖူးဘူး။လိုင်းမမိလည်း သီချင်းနားထောင်တယ်၊ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်၊ အကီနိုခွေးကလေးတွေကို videoရိုက်တယ် အသုံးမ၀င်တာမရှိပါဘူး။ပြီးတော့ အကီနိုက ဖုန်းring toneကို အကီနိုကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေပေးရတာကြိုက်တယ်။အခုလောလောဆယ်ပေးထားတာ Lionel Richieရဲ့ Hello ပါ။အခုတော့ Appleရဲ့ကြေငြာချက်သာ အမှန်အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့ရင် အကီနို မွေးနေ့အမီ အမေ့ကိုဝယ်ပေးဖို့ ပူဆာရတော့မယ်။
February 10, 2009 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
အကီနိုရဲ့ အိမ်လေးလည်းတင်ထားတာကြာလာတဲ့ အမျှလာကြည့်တဲ့ ဧည့်သည်တွေများပြားလာတဲ့အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်။ အကီနိုတခုလောက်တောင်းပန်ခြင်တာကတော့ အကီနိုအရင်ကတော့ အလုပ်လုပ်တော့ အလုပ်မှာ အချိန်ပြည့် အင်တာနက်ရတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။အခုကတော့ အလုပ်ကလည်းမလုပ်တော့ အင်တာနက်ကို တနာရီ ၅၀၀ကျပ်ပေးပြီး သုံးစွဲရတော့ ပေးရတာနဲ့ တန်အောင် အကီနိုမှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေ အရမ်းများပြားပါတယ်။ အကီနိုမှာလည်း နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တွေရတဲ့ အခိုက်မှာ မေးချင်ပြောချင်ကြတာတွေကို တခါတလေ အကီနို လုပ်စရာတွေများပြားသွားလို့ မဖြေဖြစ် မပြောဖြစ်တာ ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့။ စာကတော့ လာသမျှပြန်နိုင်အောင် Auto Reply လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက အကီနိ်ု အိမ်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကြံဥာဏ်တွေပေးတာ၊မေးခွန်းလေတွေမေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကီနိုလည်းတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီးဖြေပေးပါမယ်။ မေးခွန်းလေးတွေမေးရင် chat ကနေမမေးပဲ စာလေးရေးပေးပါလို့ အကီနိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အကီနိုကလည်း တစ်ယောက်ကနှစ်ယာက် မေးလာရင် chat ကိုမဖြေတတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်အနှောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စာကိုတော့ အကီနိုက notepad နဲ့သိမ်းသွားပြီး အိမ်ရောက်တော့မှ အေးဆေးပြန်ဖတ်၊ ဖြေသင့်တာတွေကိုလည်းဖြေနဲ့ အခုပိုစ်လေးကိုလဲ notepad နဲ့ရေးပြီးတင်ထားတာပါ။မေးပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်းကျေှးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေမေးပေးတဲ့ အတွက် အဖြေတွေကြိုးစားပြီးရှာရတဲ့ အတွက် အကီနိုမှာလည်း တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးကိုို Network ချိတ်ဆက်ခြင်း
February 8, 2009 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
အကီနို Third seminar တုန်းက Window Xpနဲ့ Vista ကိုချိတ်ဆက်ပုံလေးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Window Vista မှာ server ထားပြီးWindow Xp မှာclient ထားပြီး runထားတာပါ။
့ Network card တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ၂-လုံး၊ ယင်း ကွန်ပျူတာ ၂-လုံးတည်းကိုပဲ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ကနေ crossover network cable
တစ်ချောင်း ဝယ်ပါ… ၂-လုံးထက် ပိုမယ် ဆိုရင်တော့ switch/hub ပါ ဝယ်စရာ လိုအပ်ပါတယ်…
ကွန်ပျူတာမှာ Network card သို့မဟုတ် Network cable ကြိုးထိုးမယ့် အပေါက် မပါသေးဘူး ဆိုရင် Network Card (NIC – Network Interface Card) ဝယ်ပြီး ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ဆင်ပါ…
အကီနိုယူသွားတာကLaptop ဆိုတော့ Network cable ပါပြီးသားပါ။
၁. Start » Control Panel ထဲဝင်ပါ…
၂. Network Connections ဆိုတာ တွေ့အောင်ရှာပြီး double-click ခေါက်ပြီး ဖွင့်ပါ…
၃. Local Area Connection ဆိုတာ တွေ့ရင် ထပ်ပြီး double-click ခေါက်ပြီး ဖွင့်ပေးပါဦး…
၄. Properties button ကို ကလစ်နှိပ်ပေးပါ…
၅. Internet Protocol (TCP/IP) ဆိုတာကို click ခေါက်ပြီး select လုပ်ပါ… ပြီးရင် Properties button ကို click ခေါက်ပါ…
၆. Internet Protocol (TCP/IP) Properties ဆိုပြီး နောက်ထပ် dialog box ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်… အဲဒီထဲက Use the following IP address ကို click ခေါက်ရွေးပြီး…
၇. IP Address မှာ 192.168.0.1 ရိုက်ထည့်ပြီး Tab ခလုတ်နှိပ်လိုက်ပါ… အောက်မှာ ရှိတဲ့ subnet mask ထဲမှာ သူ့ဘာသာသူ 255.255.255.0 ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်… မပြင်ဘဲ ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ပါ…
၈. ပြီးရင် OK button တွေကို click နှိပ်ပြီး ထွက်ပါ…
နောက်ထပ် ကွန်ပျူတာ ၁-လုံးအတွက်ကတော့ အပေါ်က အဆင့်တွေ အတိုင်း အဆင့်-၁ ကနေ အဆင့်-၆ အတိုင်း ပြန်သွားပါ… အဆင့်-၇ ရောက်ပြီဆိုရင်တော့
IP address မှာ 192.168.0.2 လို့ ရိုက်ထည့်ပေးပါ… 192.168.0.1 လို့တော့ ထပ်မထည့်ပါနဲ့… အဲဒါဆို ဒီ ကွန်ပျူတာ ၂-လုံး အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
ဒီလို… network ၁-ခုတည်းမှာ ကွန်ပျူတာတွေ အတူတူ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်လို့ ရစေချင်တယ်ဆိုရင် IP address မှာ “.” လေးတွေနဲ့ ခြားထားတဲ့
ဂဏန်း ထည့်လို့ရတဲ့ နေရာ ၄-ခု ရှိတယ် မဟုတ်လား… အဲဒီလိုပဲ Subnet mask မှာလည်း ၄-ခု ရှိတယ်…
အပေါ်က စာကြောင်း ၂-ကြောင်းမှာ subnet mask ရဲ့ ပထမ ရှေ့ ၃-နေရာမှာ 255.255.255 ရှိပြီး နောက်ဆုံးနေရာမှာ0ဆိုပြီး ရှိနေတယ်နော်… IP address ရဲ့ ပထမ ရှေ့ ၃-နေရာမှာ
192.168.0 ဆိုပြီး ရှိနေတယ် မဟုတ်လား… ကွန်ပျူတာတွေကို network တစ်ခုတည်းမှာပဲ ရှိနေချင်တယ်ဆိုရင် (တစ်နည်းအားဖြင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်လို့ ရချင်တယ်ဆိုရင်)
ကွန်ပျူတာတိုင်းရဲ့ IP address ပထမရှေ့ ၃-နေရာဟာ 192.168.0 ဖြစ်စရာလိုအပ်ပါတယ်… နောက်ဆုံး ၄-နေရာကတော့ မတူညီတဲ့ ဂဏန်းတန်းဖိုး တစ်ခုစီ ထားပေးရပါမယ်…
ဒီမှာ အကွက် တစ်ခုချင်းစီ ထဲမှာ 1 ကနေ 254 အထိ ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာ ၂၅၄-လုံးအထိ ပါဝင်တဲ့ network တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်…
serverကို 192.168.0.1ပေးထားပြီး clientကိုတော့ 192.168.0.2လို့ပေးထားပါတယ်
တစ်ခု မှတ်ထားဖို့က 192.168.0.1 ကို ကွန်ပျူတာ ၁-လုံးမှာ အသုံးပြုပြီးသားဆိုရင် နောက် ကွန်ပျူတာတွေမှာ ထပ်ပေးလို့ မရပါဘူး…
ထပ်ပေးမိတယ်ဆိုရင် IP conflict ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာတွေ network အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး…
ပြီးရင်တော့ စက်အချင်းချင်း connection ရမရသိချင်ရင်
လို့ အပြန်အလှန်ရိုက်ကြည့်ပါ Reply for…. တက်လာရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် Network တခုတည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ။
February 6, 2009 November 2, 2012 ~ ahkeno	~ 1 Comment